Trypophobia ကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ?
Trypophobia ဆိုတာကတော့ အပေါက် အခေါင်းတွေ (အပေါက်အစုအဝေး) ကိုကြောက်တဲ့ရောဂါပါ။
Saint Sandy Htet• 1 year ago
ကြာခွက်မှာရှိတဲ့ အပေါက်ပုံစံလို အပေါက်အစုအဝေးတွေကိုမြင်တဲ့အခါ လူတချို့က စိတ်ခြောက်ခြားတာ၊ ရွံရှာတာမျိုးတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ခံစားရတဲ့ ရောဂါမျိုးကို Trypophobia လို့ ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။
ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ သင်ကရော Trypophobia ရောဂါခံစားနေရပြီလား? ဒါဆိုရင် Trypophobia ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အချက်တချို့ကို Duwun က အကြံပြုပေးပါမယ်။
Trypophobia ရှိတဲ့သူ တော်တော်များများက စုပြုံနေတဲ့ အပေါက်တွေကို ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်ပေမယ့် ကြောက်ရွံ့တဲ့ ပုံစံက ကွဲပြားပါတယ်။ တချို့က ကြာခွက်မှာ ရှိတဲ့ စုပြုံနေတဲ့ အပေါက်တွေကို မြင်မှကြောက်ရွံ့ကြတာဖြစ်ပြီး တချို့က စုပြုံနေတဲ့ ပူဖောင်းတွေကိုမြင်မှ ကြောက်ရွံ့တာမျိုးပါ။ဒီလိုတွေမြင်တဲ့ အခါမှာ မူးဝေတာ၊ ခြေတွေလက်တွေ တုန်တာ၊ စိတ်ထဲမှာ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ပြီး မွန်းကြပ်လာတာမျိုးဆိုပြီး လက္ခဏာတွေ ကွဲပြားပါသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ကဘယ်လိုပုံစံတွေကိုကြောက်တယ် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတာ အရင်ဆုံး သိထားရပါမယ်။
Photo - trypophobia.com
၂။ Trypophobia အခြေခံတွေကို သိထားပါ။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ရှင်းလင်းချက်အချို့ အရ Trypophobia မှာ ကနဦးအစတွေ ရှိမယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေရဲ့ အရေပြားပေါ်က အကွက်တွေ အပေါက်တွေကို ကြောက်ရွံ့တာကနေ သူတို့နဲ့ ဆင်တူတဲ့ တခြား သက်မဲ့အရာတွေကိုပါ ကြောက်ရွံ့လာတာပါ။ ဥပမာ ရေဘဝဲကောင်တွေရဲ့ စုပ်ခွက်တွေ၊ မြွေတွေ ဖားတွေပေါ်က အကွက်တွေကို ကြောက်ရွံ့တာမျိုးပါ။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသိပညာပေးပါ။
ကိုယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့ အရာတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့ အဓိက အချက်က အဲဒီအရာအကြောင်းကို သိနားလည်ထားဖို့ပါ။ တကယ်လို့ စာဖတ်နေတဲ့သူက ကြာခွက်မှာ ရှိတဲ့ စုပြုံနေတဲ့ အပေါက်တွေကို ကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီ အရာတွေက ကြာခွက်ပေါ်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်လာသလဲ၊ ဘယ်လို အကျိုးရှိစေလဲဆိုတာကို နားလည်အောင် လေ့လာတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ရမှာပါ။ သေချာနားလည်လာတဲ့အခါ အကြောက်တရားလည်း လျော့လာမှာပါ။
တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်လို့ အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ ယူဆရင် ကိုယ့်ထက် အသိဉာဏ်ကြွယ်ဝသူဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ် တွေ့ဆုံပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ကုသမှုခံယူပါ။ Trypophobia ခံစားနေရသူတိုင်းက ခံစားရတဲ့ ပုံစံချင်းမတူနိုင်ပါဘူး။ ခံစားရတာ ပြင်းထန်တဲ့ သူရှိနိုင်သလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သိပ်မခံစားရတဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲ အကူအညီရယူတာပါ။
စာဖတ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ Trypophobia ခံစားနေရတဲ့သူတွေရှိရင် အမြဲ ကြောက်ရွံ့ပြီး ရှောင်ဖယ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သေချာလေ့လာပြီး သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်။